ABEMI 41 051 379
ABAVAKALISI 98 574
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 67 609
Emva Kweminyaka Esithoba, Utitshala Wakhe Waya
Xa uOlivia waseOstreliya, wayefunda kwisikolo sabantwana abancinci, wamemela utitshala wakhe eSikhumbuzweni. Yaphela iminyaka esibhozo emmema. Ekugqibeleni, ngo-2016, lo titshala wafowuna esithi ufuna ukuya eSikhumbuzweni. Wathi ukumenywa nguOlivia qho ngonyaka kwakumenza azive ebalulekile. Ngoko lo titshala waya ehamba nomyeni wakhe. Ekubeni umyeni wakhe wayesebenzela ibhunga ledolophu, wakhumbula xa yayisakhiwa loo Holo YoBukumkani. Wabancoma abazalwana ngendlela ababesebenzisana kakuhle ngayo xa kwakusakhiwa. Lo titshala nomyeni wakhe babonwabile ngobo busuku de bakunye nabantu bokugqibela ukuhamba eholweni.
EOstreliya: Emva kweminyaka esithoba, inzondelelo kaOlivia iyavuzwa
UJacintu nowakwakhe bahlala eTimor-Leste. Ekubeni babengamaKatolika azinikeleyo, bothuka xa umtshana wabo esiba liNgqina LikaYehova, engasakhonzi kunye nentsapho yakhe. Efuna ukumbonisa ukuba ayikho le nto ayenzayo, uJacintu wagqiba kwelokuba afunde incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Eyona nto wayefuna ukuyibona ziimfundiso zobuxoki. Ekuhambeni kwexesha, wathi kumfazi wakhe: “Ndiyifundile la ncwadi. Kodwa ke andibonanga nto ibubuxoki.”
Wathi umfazi wakhe: “Mhlawumbi uyigqwagqwile. Khawuphinde uyifunde, uyithele chu ke ngoku.”
UJacintu wayenza loo nto, waphinda wabuyela kumfazi wakhe wathi: “Nangoku andibonanga nto. Yonke into eyithethayo isuka eBhayibhileni. Naxa ithetha ngokunqula abantu abafileyo ithetha kanye le nto iseBhayibhileni.”
Wathi: “Khawuyifunde okwesithathu, ngoku ukrwelele isiqendu ngasinye, uqiniseke ukuba uyasicokisisa xa usifunda. Soze ungafumani nto ebubuxoki nokuba incinci.”
UJacintu wayifundisisa kakuhle, ekrwelela isiqendu ngasinye. Ukuyigqiba kwakhe okwesithathu wathi: “Abukho tu ubuxoki! Unyanisile umtshana wethu.” Ngoku uJacintu ufunda iBhayibhile namaNgqina KaYehova.
Laxelelwa Yintombi Yalo
Udade onguvulindlela ohlala eGuam, wabonisa ibhinqa lasePohnpei ividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde iBhayibhile? Lo dade wathi uza kuphinda abuye. Wayemane esiya ekhayeni lalo, kodwa angalifumani. Ngenye imini wavulelwa yintombi yalo, wayibukelisa ividiyo ethi Yiba Ngumhlobo KaYehova. Yayithanda kakhulu le vidiyo. Xa ephinda ebuya kwavula lona emnyango linomdla wokumamela. Ngaphambi kokuba afike, intombi yeli bhinqa yathi ibawela baye ecaweni yala sisi ebeyibonisa ividiyo. Loo nto yalenza lanomdla. Baqalisa isifundo seBhayibhile baza bancokola ngexesha nangosuku abaza kufunda ngalo.
UTerence ongumveleli wesiphaluka wahamba nomfazi wakhe uStella, baya eInakor, indawo ekungashunyayelwayo kuyo esePapua New Guinea. UTerence uthi: “Ngentsasa yokuqala sifikile, sathi sisalele seva kunkqokqozwa emnyango. Sathi xa sivula kwabe kukho abantu abaninzi ababesilindile, ngoko saqala ngentsimbi yesithandathu ekuseni ukushumayela de kwasemin’ emaqanda. Sakhe sathi xha ukuze siyokuhlamba. Sathi sigqiba sabe silindwe ngabaninzi nangakumbi. Sashumayela ukususela ngentsimbi yesibini de kwasezinzulwini zobusuku.” Ngentsasa elandelayo, uTerence nomfazi wakhe bavuka kwakusasa baya kushumayela komnye ummandla. Njengesiqhelo kwafika abantu abaninzi bebafuna kwindawo ababehlala kuyo, kodwa babengekho. UTerence uthi: “Bathi bakuva ukuba sibheke ngaphi, basilandela. Saphinda sashumayela de kwasemin’ emaqanda. Sathi xa sifika apho sihlala khona sabe silindwe ngabanye. Le nto yayisenzeka yonk’ imihla. Abantu balapho ‘babenjengezimvu ezingenamalusi.’”—Mat. 9:36.
EPapua New Guinea: Abantu balinde uTerence noStella ngomdla omkhulu
Izipho Aziphathele Ugqirha
UAgnès, onguvulindlela eNew Caledonia, wayeqaqanjelwa yingalo waza waya kugqirha ekuthiwa yiphysiotherapist. Ngoxa enceda uAgnès, lo gqirha wathi baninzi abantu ababone besentlungwini, nto leyo embangela azibuze ukuba kutheni uThixo ekhohlakele kangaka. Ethe cwaka uAgnès wambulela uYehova ngokumpha eli thuba lokuba amthethelele. Wambonisa iphecana elithi Ngaba Ukubandezeleka Kuya Kuze Kuphele? waza wamfundela iSityhilelo 21:3, 4.
Lo gqirha wathi: “Ingathi le vesi ugqib’ oyifunda ayikho kule yam iBhayibhile nje; yona ineencwadi zeVangeli kuphela.” Eqonda ukuba uAgnès liNgqina LikaYehova, wathi wakhe wadibana namaNgqina kwilizwe lakowabo, eChile.
UAgnès wakhumbula ukuba ku-JW Broadcasting kukho ingxelo yesebe ethetha ngeChile. Xa ebuyela kulo gqirha, weza netablet yakhe wambonisa ividiyo enale ngxelo. Wavuya kakhulu xa ebona iBheteli neHolo Yendibano yaseChile. Emva kokuba ebukele, uAgnès wathi, “Nantsi enye into endikuphathele yona, iBhayibhile epheleleyo, ukuze uzifundele iSityhilelo 21:3, 4, la vesi bendikufundele yona kwiveki ephelileyo!” Ugqirha waphakama esitulweni, wamanga uAgnès esithi, “Ndibulela kakhulu ngezi zipho zibini zithandeka kangaka!”
ENew Caledonia: Ugqirha wakhe waba nomdla
Xa ephinda ebuya uAgnès, wamphathela incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? waza wamcacisela ngakumbi ngezinto ezibangela iintlungu emhlabeni. Lo gqirha wathi uza kuya ekhefini eChile, uza kuhamba nayo le ncwadi kuba ufuna ukuyifunda ayigqibe.